ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများ၏လူငယ်စားသုံးမှုနှင့်စပ်လျဉ်း။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်မှုခင်းဆိုင်ရာစိန်ခေါ်မှုများ - ဇာတ်ကြောင်းပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း (၂၀၂၁) - သင့် ဦး နှောက်ပေါ်၌သင်၏ ဦး နှောက်
ကောက်နုတ်ချက်: အဓိကတွေ့ရှိချက်များကကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည် ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနှင့်ပထမဆုံးဆက်သွယ်မှုသည်အသက် ၈ နှစ်အရွယ်တွင်စတင်သည်ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်အရေးကြီးသောအပြုအမူနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကျိုးဆက်များနှင့်အတူ hypersexualization, စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှောင့်အယှက်များနှင့်ကျား, မမညီမျှမှုများ၏အစဉ်အမြဲ။ ထို့အပြင်လူငယ်များ၏ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကြည့်ရှုခြင်းနှင့်လည်းဆက်စပ်နေသည် paraphilias ပိုမိုဆိုးရွားလာခြင်း၊ နောက်ဆုံးတွင်၎င်းသည်အွန်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်ခံရမှုနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။
မြီးကောင်ပေါက် 2021, 1(၂) ၁၀၈-၁၂၂; https://doi.org/10.3390/adolescents1020009
Gassó, Aina အမ်နှင့် Anna Bruch-Granados ။
ယနေ့ခေတ်တွင်နည်းပညာသည်လူ ဦး ရေ၏များပြားသောနေ့စဉ်လုပ်ငန်းဆောင်တာများတွင်ပါ ၀ င်လာသည်။ အရွယ်မရောက်သေးသောလူငယ်များနှင့်လူငယ်များ၏လုပ်ဆောင်မှုများ၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်လူမှုရေးဖြစ်စဉ်များကိုပညာရေး၊ သိပ္ပံပညာနှင့်မှုခင်းဆိုင်ရာအသိုင်းအဝိုင်းများ၏အာရုံစူးစိုက်မှုနှင့်စိုးရိမ်ပူပန်မှုများကိုအွန်လိုင်းကမ္ဘာသို့လွှဲပြောင်းပေးခဲ့သည်။ ဆယ်ကျော်သက်များကညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုဤအွန်လိုင်းကမ္ဘာသစ်မှရရှိသောစိုးရိမ်စရာအကောင်းဆုံးပြofနာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤစာပေပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း၏ရည်ရွယ်ချက်မှာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုခြင်းမှရရှိသောအကျိုးဆက်များနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအနှောင့်အယှက်များကိုအာရုံစူးစိုက်ရန်နှင့် paraphilias၊ ကျူးလွန်ခြင်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစော်ကားမှုကိုကျူးလွန်ခြင်းစသည့်ဤဖြစ်စဉ်၏မှုခင်းဆိုင်ရာအကျိုးသက်ရောက်မှုများ၊ အွန်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသားကောင်များ၏ပုံစံအသစ်များဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး။ အဓိကတွေ့ရှိချက်များအရညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနှင့်ပထမဆုံးဆက်သွယ်မှုသည်အသက် ၈ နှစ်အရွယ်တွင်စတင်သည်၊ အရေးကြီးသည့်အမူအကျင့်နှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကျိုးဆက်များဖြစ်သည့် hypersexualization၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမသန်မစွမ်းမှုများနှင့်ကျား၊ ထို့အပြင်လူငယ်များအနေဖြင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေကြည့်ရှုခြင်းသည် paraphilias ပိုမိုဆိုးရွားလာခြင်း၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးလွန်မှုများနှင့်သားကောင်နှိပ်စက်ခံရမှုများပြားလာခြင်းနှင့်ဆက်စပ်နေပြီးနောက်ဆုံးတွင်၎င်းသည်အွန်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးလွန်မှုများနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်။ အကျိုးသက်ရောက်မှုများနှင့်အနာဂတ်သုတေသနလိုင်းများကိုဆွေးနွေးကြသည်။
keywords: ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေ၊ မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်၊ မှုခင်းစိန်ခေါ်မှုများ; လူငယ် လိင်
စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရှုထောင့်မှကြည့်လျှင်လိင်ကိုခန္ဓာဗေဒ၊ ဇီဝကမ္မဗေဒနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအချက်များအကြားဆက်စပ်မှုအဖြစ်နားလည်သဘောပေါက်ပြီး၊ လိင်နှင့်ဆက်စပ်သောစိတ်ခံစားမှုနှင့်အမူအကျင့်ဆိုင်ရာဖြစ်ရပ်များကိုမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်တွင်ခိုင်မာအောင်စတင်သည်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဝိသေသလက္ခဏာသည်ငယ်စဉ်ကလေးဘဝတွင်စတင်ဖွံ့ဖြိုးလာခဲ့ပြီးလူမှုရေးနှင့်ပြင်ပမှအချက်များအပါအ ၀ င်မတူညီသောအချက်များဖြင့်ပြုပြင်ပြောင်းလဲနိုင်သည်။ ထိုရှုထောင့်မှကြည့်လျှင်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကြည့်ရှုခြင်းသည်ဆယ်ကျော်သက်များနှင့်လူငယ်များအတွက်အရေးကြီးသောနှင့်သက်ဆိုင်သည့်ပြbecomesနာဖြစ်လာသည်။1] ။ လူငယ်များကိုကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကအသက် ၁၀ နှစ်မှ ၂၄ နှစ်အတွင်းတစ် ဦး ချင်းစီအဖြစ်သတ်မှတ်ထားသည်။ ဤစုံစမ်းစစ်ဆေးမှု၏ရည်ရွယ်ချက်အရကျွန်ုပ်တို့သည်အသက် ၁၀ နှစ်မှ ၂၄ နှစ်အကြားရှိပုဂ္ဂိုလ်များကိုနားလည်ပြီးလူငယ်များနှင့်လူငယ်များကိုလွတ်လပ်စွာရည်ညွှန်းမည်။
နေ့စဉ်လှုပ်ရှားမှုများတွင်အင်တာနက်နှင့်အိုင်စီတီ (သတင်းအချက်အလက်နှင့်ဆက်သွယ်ရေးနည်းပညာ) ကိုထည့်သွင်းထားခြင်း မှစ၍ လူ့အဖွဲ့အစည်းသည်ကဏ္ many များစွာတွင်ပြောင်းလဲမှုများကိုကြုံတွေ့ခဲ့ရသည်။ လူမှုရေးဆိုင်ရာအပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုများသည်လျင်မြန်စွာတိုးတက်ခဲ့သည်။ အင်တာနက်နှင့်ချက်ချင်းအလိုအလျောက်အင်တာနက်ဆက်သွယ်မှုရှိသည့်အသိဉာဏ်ရှိသည့်ကိရိယာအသစ်များပေါ်ပေါက်လာခြင်းကရုပ်ပုံများအပါအ ၀ င်မည်သည့်အမျိုးအစားကိုမဆိုချက်ချင်းဆက်သွယ်ခြင်းနှင့်အကန့်အသတ်မရှိချက်ချင်းလက်ငင်းလက်လှမ်းမီခြင်းကိုရရှိစေသည်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသည်မကြာသေးမီကဖြစ်ပျက်ခဲ့သောအဖြစ်အပျက်အသစ်တစ်ခုမဟုတ်ပါ၊ ၎င်း၏ပုံပန်းသဏ္ဌာန်ကိုရှေးခေတ်ဂရိများသို့ပြန်တွေ့နိုင်သည်။2]; သို့သော်နည်းပညာဆိုင်ရာစက်ပစ္စည်းအသစ်များကိုအနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေသည်နှင့်အတူပေါ်ထွက်လာသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေအသစ်သည်ကွဲပြားခြားနားပြီးထူးခြားသောပင်ကိုစရိုက်လက္ခဏာများရှိသည်၊ ၎င်းကို“ အပြာအပြာစာပေရုပ်ပုံ” နှင့်ကွဲပြားခြားနားသည်။ ဘောလီစတာ et al ။  ကိုအောက်ပါအတိုင်းသတ်မှတ်ပါ။
ရုပ်ပုံအရည်အသွေး - ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေအသစ်သည်အရည်အသွေးမြင့်မားစွာအဆက်မပြတ်တိုးတက်နေသောအရည်အသွေးမြင့်မှတ်တမ်းများအပေါ်အခြေခံသည်။
သုံးစွဲနိုင်မှု - ကျယ်ပြန့်။ အကန့်အသတ်မရှိသောကမ်းလှမ်းမှုရှိသည်။ ၎င်းကိုမည်သည့်စက်ပစ္စည်းမှမဆိုကန့်သတ်ချက်များမရှိဘဲဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်သည်။
အကန့်အသတ်မရှိသောလိင်အကြောင်းအရာ -“ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေအသစ်” တွင်ပြသထားသောလိင်အလေ့အကျင့်များတွင်အန္တရာယ်ရှိသောလိင်အလေ့အကျင့်များသို့မဟုတ်တရားမ ၀ င်လိင်ဆက်ဆံခြင်းများအပါအ ၀ င်ကန့်သတ်ချက်များမရှိပါ။
စာပေများအရဆယ်ကျော်သက်လူငယ် ၇ ရာခိုင်နှုန်းမှ ၅၉ ရာခိုင်နှုန်းသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိကြည့်ရှုစားသုံးကြသည်။3] ။ ဆယ်ကျော်သက်များ၌ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသုံးစွဲမှုနှုန်းပျံ့နှံ့မှုနှင့်အမျိုးမျိုးကွဲပြားမှုသည်နမူနာများ၊ ပါဝင်သူများ၏အသက်နှင့်သုံးစွဲမှုနည်းလမ်းများကွဲပြားမှုကြောင့်ဖြစ်သည်။ သုံးစွဲမှုမည်သည့်အမျိုးအစား (ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနှင့်မရည်ရွယ်ဘဲစားသုံးမှု) အတွက်ပျံ့နှံ့မှုနှုန်းသည်အသုံးပြုသောအစီအမံပေါ် မူတည်၍ ၇ မှ ၇၁% အထိရှိသည်။3] ။ ထို့အပြင်ကျားမကွဲပြားမှုကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာလေ့လာမှုများအရလွန်ခဲ့သောခြောက်လကယောက်ျားလေး ၉၃ ရာခိုင်နှုန်းနှင့်အသက် ၁၆ နှစ်မှ ၁၉ နှစ်ကြားမိန်းကလေး ၅၂ ရာခိုင်နှုန်းသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကြည့်ရှုခဲ့သည်။4] ။ ဤကျားမကွဲပြားမှုများကို Ballester, Orte နှင့် Pozo တို့မှအစီရင်ခံခဲ့သည်။5] အဘယ်သူ၏ရလဒ်များကအွန်လိုင်းညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများကိုယောက်ျားလေးများ (၉၀.၅%) နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်မိန်းကလေးများ (၅၀%) ထက်သိသိသာသာပိုမိုများပြားကြောင်း၊ အမျိုးသားသင်တန်းသားများတွင်အမျိုးသမီးပါဝင်မှုနှုန်းသည်အမျိုးသမီးများထက်ပိုမိုများပြားကြောင်းဖော်ပြသည်။
အသက်ကွာခြားမှုကိုအဓိကထားလေ့လာသည့်လေ့လာချက်အရအသက် ၁၄ နှစ်မှ ၁၇ နှစ်အကြားရှိစပိန်ဆယ်ကျော်သက်များ၏ ၅၀% သည်အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုကြသည်။6] ။ ထို့အပြင် Ballester et al ။ [1၁၆ နှစ်မှ ၂၉ နှစ်ကြားရှိလူငယ်များ၏ ၇၀ ရာခိုင်နှုန်းနီးပါးသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုကြည့်ရှုကြသည်ဟု] ဖော်ပြခဲ့သည်။ ၎င်းတို့၏ရလဒ်များကစပိန်နိုင်ငံတွင်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနှင့်ပထမဆုံးအဆက်အသွယ်၏အသက်အရွယ်၊ ကလေးများသည် ၈ နှစ်အရွယ်တွင်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများနှင့်ပထမဆုံးအကြိမ်ဆက်သွယ်ခြင်း၊ ၁၃-၁၄ နှစ်မှ စ၍ ယေဘူယျစားသုံးမှုများတိုးတက်လာကြောင်းပြသသည်။1].
လက်ကိုင်ဖုန်းများပိုင်ဆိုင်မှုပျံ့နှံ့မှုကညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေတွေကိုဘယ်နေရာမဆိုနီးပါးကြည့်ရှုနိုင်ပြီးလူငယ်များကိုပုဂ္ဂလိကနှင့်အုပ်စုလိုက်ပါကြည့်ရှုနိုင်သည်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုကြည့်ရှုခြင်းနှင့်အသုံးပြုခြင်းသည်ဤနည်းလမ်းသစ်သည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၊ ကျားမဆက်ဆံရေး၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးကျော်မှုနှင့်လိင်အပေါ်အထူးအကျိုးသက်ရောက်သည်။ အထူးသဖြင့်သူတို့၏လိင်မှုဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကြောင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေအကြောင်းအရာများကိုထိထိရောက်ရောက်ထိခိုက်လွယ်သော3].
မကြာသေးမီကပြုလုပ်ခဲ့သည့်လေ့လာမှုတွင်ပါဝင်သူ ၄၀.၇% သည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသုံးစွဲမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ဆိုးကျိုးများခံစားခဲ့ရကြောင်း၊ လူမှုရေး၊ ပညာရေး၊7] ။ အများအားဖြင့်အရွယ်မရောက်သေးသူများ၌ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေကြည့်ရှုခြင်းသည်ဆိုးကျိုးများနှင့်ဆက်စပ်နေသည်ဟုစာရေးသူများစွာကထောက်ပြကြသည်။1,5,7,8] ။ ဥပမာ Burbano နှင့် Brito [ဥပမာ]8] ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေကြည့်ခြင်းသည်ဆယ်ကျော်သက်များ၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအပေါ်တိုက်ရိုက်အကျိုးသက်ရောက်ကြောင်း၊ လိင်နှင့် ပတ်သက်၍ ပညာရေးပုံစံများကိုလှည့်ဖြားရန်နှင့်တိကျမှုမရှိကြောင်းဖော်ပြခဲ့သည်။ ထို့အပြင်ပေတရုနှင့် Valkenburg [3ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုဆယ်ကျော်သက်အဖြစ်ကြည့်ခြင်းအားဖြင့်အကာအကွယ်မဲ့လိင်ဆက်ဆံခြင်း၊ မိတ်ဖက်များနှင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်း၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးလွန်ခြင်းနှင့်ကျူးလွန်ခံရခြင်းစသည့်အန္တရာယ်ရှိသောလိင်ဆိုင်ရာအပြုအမူများပေါ်ပေါက်လာခြင်းနှင့်ဆက်စပ်နေသည်ဟု] တွေ့ရှိခဲ့သည်။ ထို့အပြင် Burbano နှင့် Brito  အစောပိုင်းအဆင့်များတွင်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုသုံးစွဲခြင်းသည်အထူးသဖြင့်အရွယ်မရောက်သေးသူများအနေဖြင့် sexting သို့မဟုတ် online grooming ကဲ့သို့သောအွန်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအနိုင်ကျင့်ခြင်းပုံစံများနှင့်ဆက်နွှယ်ကြောင်းပြသခဲ့သည်။
ထို့အပြင်စာပေသည်လူငယ်များညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများသုံးစွဲမှုနှင့်မှုခင်းဆိုင်ရာနှင့်ဥပဒေရေးရာသက်ရောက်မှုများအကြားဆက်စပ်မှုကိုပြသခဲ့သည်။ မကြာသေးမီကလေ့လာမှုများကလိင်ဆိုင်ရာရှင်းလင်းပြတ်သားစွာဖော်ပြသောပစ္စည်းများကိုစောစီးစွာစားသုံးခြင်းနှင့်ပုံသဏ္vာန်နှင့်ပိုမိုဆိုးရွားလာခြင်းအကြားဆက်စပ်မှုကိုမီးမောင်းထိုးပြခဲ့သည်။9,10] ။ ထို့အပြင်သုတေသနသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုစောစီးစွာစားသုံးခြင်းနှင့်အတင်းအကျပ်စားသုံးခြင်းနှင့်ယောက်ျားများမှလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးလွန်မှုများနှင့်အမျိုးသမီးများအားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးကျော်မှုအကြားအပြန်အလှန်ဆက်စပ်မှုရှိခြင်းကိုညွှန်ပြခဲ့သည်။3] ။ နောက်ဆုံးအနေဖြင့်မကြာသေးမီကတွေ့ရှိချက်များအရညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုစောစီးစွာစားသုံးခြင်းနှင့် sexting ကဲ့သို့သောအွန်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများတွင်ပိုမိုပါ ၀ င်မှုတိုးမြှင့်ခြင်းအကြားဆက်နွယ်မှုကိုဖော်ပြသည် sextortion သို့မဟုတ် online grooming11].
မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများသုံးစွဲမှုနှင့် ပတ်သက်၍ သုတေသနပြုသည့်အဖွဲ့သည်တိုးပွားလာခဲ့သည်။ လေ့လာမှုတော်တော်များများက၎င်းစားသုံးမှု၏လူငယ်များ၏လူမှုရေးနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုများနှင့်အပျက်သဘောဆောင်သောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ဥပဒေရေးရာအကျိုးဆက်များဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည့်အခြားဆက်စပ်သောမှုခင်းဆိုင်ရာသက်ရောက်မှုများကိုမီးမောင်းထိုးပြခဲ့သည်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသုံးစွဲသူများနှင့်လူမှုရေး၊ လိင်နှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကျိုးဆက်များအကြားဆက်စပ်မှုကိုဖြေရှင်းရန်လက်တွေ့နှင့်လက်တွေ့မဟုတ်သည့်သုတေသနကိုဖော်ထုတ်ရန်ဤပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းသည်နောက်ထပ်မှုခင်းဆိုင်ရာအကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုဖော်ထုတ်ရန်ဖြစ်သည်။ တစ် ဦး ဇာတ်ကြောင်းပြန်လည်သုံးသပ်တဲ့သီအိုရီနှင့်ဆက်စပ်ရှုထောင့်ကနေတိကျတဲ့ခေါင်းစဉ်သို့မဟုတ်ဆောင်ပုဒ်၏သိပ္ပံ၏ပြည်နယ်ကိုဖော်ပြရန်နှင့်ဆွေးနွေးတင်ပြသည့်ထုတ်ဝေဖြစ်ပါတယ်။12] ။ ဤစာတမ်း၏ရည်ရွယ်ချက်အနေဖြင့်စပိန်သုတေသနအပါအ ၀ င်လူငယ်များ၏ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသုံးစွဲမှုနှင့်ပတ်သက်သည့်မေးခွန်း၏အခြေအနေကိုပထမချဉ်းကပ်ခြင်းနှင့်ချဉ်းကပ်မှုအဖြစ်စပိန်သုတေသနအပါအ ၀ င်ယခင်ပြန်လည်သုံးသပ်မှုများပြုလုပ်ခဲ့သည်။ Peter နှင့် Valkenburg ၏ (၂၀၁၆) စနစ်တကျပြန်လည်သုံးသပ်မှုထုတ်ပြန်ပြီးကတည်းကလူငယ်များသည်ညစ်ညမ်းမှုကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိထိတွေ့ခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း။ သက်ဆိုင်ရာပံ့ပိုးမှုများပြုလုပ်ပြီးဖြစ်သည်။ ဤလေ့လာမှုသည်စပိန်စာပေအပါအ ၀ င်ထိုနှင့်အခြားပံ့ပိုးမှုများအားပြန်လည်သုံးသပ်ရန်ရည်ရွယ်သည်၊ မေးခွန်း။ မိဘများ၊ ပညာရေးအသိုက်အ ၀ န်းနှင့်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူများအနေဖြင့်ဤဖြစ်စဉ်ကြောင့်ထိခိုက်မှုဖြစ်နိုင်သောလူငယ်များနှင့်သက်ဆိုင်သောဤခေါင်းစဉ်ကိုကျွန်ုပ်တို့စဉ်းစားပါသည်။
ပြန်လည်သုံးသပ်မှုတွင်ပါ ၀ င်ရမည့်အချက်များမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည် -
ဆယ်ကျော်သက်နှင့်လူငယ်လူ ဦး ရေတွင်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသုံးစွဲမှုကိုလေ့လာခြင်း (လက်တွေ့သို့မဟုတ်လက်တွေ့မဟုတ်သော၊ ပါရဂူဘွဲ့စာတမ်းမှ လွဲ၍) သုတေသန။
ဤပြန်လည်သုံးသပ်မှုတွင်ပါ ၀ င်သောအချက်အလက်များကိုအောက်တိုဘာ၊ နို ၀ င်ဘာလနှင့်ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၀ တလျှောက်လုံးကောက်ယူခဲ့သည်။ ရှာဖွေရေးတွင်ပင်ကိုယ်မူလနှင့်လက်တွေ့မဟုတ်သောသုတေသနများပါဝင်သည်။ အောက်ပါဒေတာဘေ့စ်များကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ SCOPUS, PsychInfo, MEDLINE နှင့် PUBMED,“ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေ”၊ “ လူငယ်”၊ “ မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်”၊ “ အရွယ်မရောက်သေးသူ”၊ “ ဆယ်ကျော်သက်” နှင့်“ အကျိုးဆက်များ” ဟူသောစကားလုံးများကိုအသုံးပြုသည်။ ထို့အပြင်ပြန်လည်သုံးသပ်သည့်ဆောင်းပါးများ၏ရည်ညွှန်းစာရင်းသည်သုတေသနခေါင်းစဉ်နှင့်စပ်လျဉ်း။ ဆန်းစစ်ခဲ့သည်။ လူငယ်များကိုကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကအသက် ၁၀ နှစ်မှ ၂၄ နှစ်အတွင်းတစ် ဦး ချင်းစီအဖြစ်သတ်မှတ်ထားသည်။ ဤစုံစမ်းစစ်ဆေးမှု၏ရည်ရွယ်ချက်အရကျွန်ုပ်တို့သည်အသက် ၁၀ နှစ်မှ ၂၄ နှစ်အကြားရှိပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်ကြောင်းနားလည်ပြီးလူငယ်များနှင့်လူငယ်များကိုလွတ်လပ်စွာရည်ညွှန်းသည်။ ထို့အပြင်ပြန်လည်သုံးသပ်ထားသောလေ့လာမှုအများစုသည်၎င်းတို့၏သုတေသနတွင်အသုံးပြုသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေ (လိင်ကွဲ၊ တန်းတူ၊ အမျိုးသမီး၊ စသည်တို့) နှင့်လုံးဝလိင်ကွဲလိင်မှုဆိုင်ရာအပြာစာပေများကိုခွဲခြားဖော်ပြခြင်းမရှိကြောင်းသတိပြုသင့်သည်။
ခြုံ။ ပြောရလျှင်ပြန်လည်သုံးသပ်ချက်တွင်စာတမ်း ၃၀ ပါ ၀ င်သည်။ စာတမ်း ၃၀ တွင် ၁၈ ခုသည်အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် (၆၀%)၊ ၈ ခုမှာစပိန်ဘာသာစကားဖြင့် (၂၆.၇%) ဖြစ်သည်။ ပြန်လည်သုံးသပ်စာတမ်းများ၏စုစုပေါင်းနမူနာထဲမှ ၁၈ ခုသည်ပင်ကိုယ်မူလဆောင်းပါးများ (၆၀%) ဖြစ်ပြီး၊ ထုတ်ဝေသည့်နှစ်များသည် ၂၀၀၄ မှ ၂၀၂၀ အထိဖြစ်သည်။ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာထားသောစာတမ်းများ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များနှင့်သက်ဆိုင်သည့်ရလဒ်များကိုဖော်ပြထားသည်။ စားပွဲတင် 1.
စားပွဲတင် 1 ။ ပြန်လည်သုံးသပ်တွင်ပါဝင်သည်လေ့လာမှုများအသေးစိတ်။
၃.၁ ။ ဆယ်ကျော်သက်များတွင်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသုံးစွဲမှုနှင့်ဆက်စပ်သောလူမှုရေးနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြProbleနာများ
၃.၁.၁ ။ အပြာစာပေစွဲလမ်းမှု
အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေကြည့်ခြင်းနှင့်စားသုံးခြင်းသည်ယနေ့ခေတ်လူငယ်များအကြားကျယ်ပြန့်စွာကျင့်သုံးနေသောအလေ့အကျင့်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုအစောပိုင်းအရွယ် (ပုံမှန်အားဖြင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်) တွင်စတင်နိုင်သော်လည်း၎င်းသည်စားသုံးမှုနှင့်သက်ဆိုင်သောအခက်အခဲများသို့မဟုတ်ပြောင်းလဲမှုများပေါ်ပေါက်လာသည့်အခါလူကြီးမဖြစ်မှီထိုဖော်ပြချက်ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်သင့်လျော်သည်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကြည့်ရှုခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောအဓိကပြissuesနာတစ်ခုမှာအလွယ်တကူအလွယ်တကူကြည့်ရှုနိုင်ပြီးလက်တွေ့မကျသောအမြင်လှုံ့ဆော်မှုသည်စွဲလမ်းမှုကိုအားဖြည့်ပေးသည် (Ledesma 2017) ။
Laier, Pawlikowski, Pekal နှင့် Paul  အွန်လိုင်းမှညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေစွဲလမ်းမှုနှင့်ဆေးစွဲမှုတို့သည်အခြေခံနောက်ခံဆိုင်ရာ neurobiological ယန္တရားများကိုမျှဝေသုံးစွဲကြောင်းနှင့်သူတို့၏စွဲလမ်းမှုတွင်အလားတူလုပ်ငန်းစဉ်များဖြစ်ကြောင်းနှင့်အပြာစာပေရုပ်ပုံများစားသုံးမှု၌လှုံ့ဆော်မှုများသည်ပိုမိုမြန်ဆန်ကြောင်း၊ နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးများထက် (ကလစ်တစ်ချက်မှတဆင့်) ကိုပိုမိုအလွယ်တကူဝင်ရောက်။
နောက်ထပ်သုတေသနသည်ပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှုနှင့်အမူအကျင့်ဆိုင်ရာစွဲလမ်းမှုများအကြားရှင်းလင်းပြတ်သားသောဆက်နွယ်မှုကိုထူထောင်ခဲ့သည်။ အမျိုးအစားနှစ်မျိုးလုံးသည်စွဲလမ်းစေသောလှုံ့ဆော်မှုနှင့် neurobiological လမ်းကြောင်းများအပေါ်သည်းခံခြင်းကဲ့သို့သောဘုံဝိသေသလက္ခဏာများကိုမျှဝေသည်။ Grant, ဘရူနှင့် Potenza  မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုနှင့်အမူအကျင့်ဆိုင်ရာစွဲလမ်းမှုနှစ်ခုလုံး၏အဖြစ်များသောလက္ခဏာသုံးခုကိုမီးမောင်းထိုးပြသည်။ စွဲလမ်းစေသည့်လှုံ့ဆော်မှုကိုတုံ့ပြန်ခြင်း၊ ပျော်ရွှင်မှု၏ထုံဆေးအကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့်အလိုတော်တဖြည်းဖြည်းယိုယွင်းခြင်း။ Dodge (2008) သည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုအတင်းအကျပ်နှင့်နာတာရှည်စားသုံးသူများ၏အာရုံကြောဆိုင်ရာပြောင်းလဲမှုများကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခဲ့သည်။ စွဲလမ်းသူတစ် ဦး ချင်းသည်တူညီသောစိတ်လှုပ်ရှားမှုအဆင့်ကိုထိန်းသိမ်းရန် ပို၍ ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံများ၊ လှုံ့ဆော်မှုအသစ်များနှင့်ပိုမိုခက်ခဲသောအကြောင်းအရာများလိုအပ်ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့သည်။ မကြာသေးမီကစာပေပြန်လည်သုံးသပ်မှုတွင်အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံအသုံးပြုမှုသည်မြင့်တက်လာနေပြီးစွဲလမ်းမှုအတွက်သုံးဆတစ် ဦး“ သြဇာလွှမ်းမိုးမှု” ဖြစ်သောသုံးစွဲနိုင်မှု၊ တတ်နိုင်မှုနှင့်အမည်ဝှက်ခြင်းကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင်သည်။15] ။ စာရေးသူအဆိုအရဤပြproblemနာသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကြည့်ရှုခြင်းနှင့်လိင်မှုကိစ္စဖွံ့ဖြိုးမှုနှင့်အထူးသဖြင့်လူငယ်လူရွယ်များအကြားဆိုးကျိုးသက်ရောက်နိုင်သည်။15].
နောက်ဆုံးအနေဖြင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုထပ်ခါတလဲလဲအသုံးပြုခြင်းသည်လူငယ်များအတွက်အရေးကြီးသောသက်ရောက်မှုများနှင့်အပြောင်းအလဲများကိုဖြစ်စေနိုင်သည်။ မကြာသေးမီကလေ့လာမှုတစ်ခုအရဆန်းစစ်လေ့လာထားသည့်နမူနာ၏ ၆၀% သည်စိုက်ထူရန်သို့မဟုတ်သူတို့၏တကယ့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့်စိတ်လှုပ်ရှားရန်လွန်စွာခက်ခဲသောပြသနာများရှိသော်လည်းအွန်လိုင်းမှညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်သောအခါထိုသို့ပြုလုပ်နိုင်သည်။33] ။ 3T သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ်စကင်ဖတ်စစ်ဆေးမှုကိုအသုံးပြုပြီးနောက်ထပ်သုတေသနပြုမှုသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများနှင့်ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် ဦး နှောက်ပြောင်းလဲမှုများကိုကြည့်ရှုခြင်းအတွက်တစ်ပတ်လျှင်နာရီနှင့်အကြားဆက်စပ်မှုကိုတွေ့ရှိရကြောင်းတွေ့ရှိရသည်။ လက်ဝဲ putamen အတွက် - တုံ့ပြန်မှုပါရာဒိုင်း  ။ ကူနှင့်ဂယ်လီနာ  သူတို့၏တွေ့ရှိချက်များကညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုအချိန်ကြာမြင့်စွာသုံးစွဲသူများသည်ထိုကဲ့သို့သောအကြောင်းအရာများကိုသည်းခံနိုင်စွမ်းရှိကြောင်းသက်သေပြခဲ့ပြီးညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုလှုံ့ဆော်မှုမြင့်မားစွာထိတွေ့ခြင်းသည်သဘာဝလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုများကိုအာရုံကြောဆိုင်ရာတုန့်ပြန်မှုကျဆင်းစေနိုင်သည်ဟုယူဆခြင်းဖြစ်သည်။ Kühnနှင့် Gallinat တို့၏ရလဒ်များကိုအသက် ၂၁ မှ ၄၅ နှစ်အရွယ်ရှိအရွယ်ရောက်ပြီးသောအရွယ်ရောက်ပြီးသောနမူနာကို အသုံးပြု၍ ရရှိခဲ့သော်လည်းရေရှည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုခြင်းသည်လူငယ်ကဲ့သို့သောအစောပိုင်းဘဝအဆင့်တွင် ဦး နှောက်ကိုအကျိုးသက်ရောက်စေလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ရသည် .
၃.၁.၂ ။ Hypersexualization နှင့် Hypersexuality
ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုစွဲစွဲခြင်းနှင့်စွဲလမ်းစေခြင်း၏နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးများမှာလိင်မှုကိစ္စ (hypersexuality)၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် hypersexualization နှင့်ရင်းနှီးသောဆက်ဆံရေးများနှင့်လိင်စွဲလမ်းမှု (autoeroticism (သို့) လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမိတ်ဖက်များ) များတိုးပွားလာခြင်းကိုတွေ့ရသည်။ ဒီသဘောနဲ့ Fagan  ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေကြည့်ရှုခြင်းသည်လိင်ဆက်ဆံခြင်း၏သဘောသဘာဝနှင့် ပတ်သက်၍ သဘောထားများနှင့်အတွေးအခေါ်များကိုသိသိသာသာပျက်ပြားစေသည်ဟုသူ၏ပြန်လည်သုံးသပ်မှုတွင်ဖော်ပြခဲ့သည်။ compulsive အပြုအမူသို့မဟုတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲနှင့်ပတ်သက်။ Cooper က, Galdbreath နှင့် Becker က  နေ့စဉ်ပြproblemsနာများနှင့်ရင်ဆိုင်ရန်အလို့ငှာအွန်လိုင်းလိင်မှုကိစ္စကိုပါဝင်သူများကပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းနှင့်အခြားသုတေသနများတွင်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသုံးစွဲမှုကိုအနိုင်ကျင့်ခြင်းနှင့်ထကြွလွယ်သောအပြုအမူများနှင့်ဆက်စပ်ထားသည်ဟုဖော်ပြခဲ့သည်။23] ။ စာရေးသူနှစ် ဦး စလုံး၏ရလဒ်များကိုအရွယ်ရောက်ပြီးသူနမူနာ (+18) ကို အသုံးပြု၍ ရသော်လည်းလူငယ်များသည် ၄ ​​င်းတို့၏တွေ့ရှိချက်များနှင့်အနီးကပ်ဆက်စပ်မှုရှိနိုင်သည့်အထူးသဖြင့်စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းသောဘဝကာလဖြစ်ကြောင်းထောက်ပြရန်အရေးကြီးသည်။ ဤကိစ်စတှငျ Efrati နှင့် Gola  လိင်ဆိုင်ရာအပြုအမူအားလှုံ့ဆော်သောလိင်ဆက်ဆံခြင်း (CSB) ကိုတင်ပြသောလူငယ်များသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကြည့်ရှုနှုန်းပိုမိုမြင့်မားကြောင်းအတည်ပြုပြောကြားခဲ့သည်။17].
လေ့လာမှုအတော်များများသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသုံးစွဲမှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့်၎င်း၏လိင်သဘောထားများ၊ ကိုယ်ကျင့်တရားစံနှုန်းများနှင့်လူငယ်များ၏လိင်မှုဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုအပေါ်သြဇာသက်ရောက်သည်။5,8,20] ။ လူငယ်များသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဗဟုသုတနှင့်သတင်းအချက်အလက်ရရှိရန်နည်းလမ်းတစ်ခုအဖြစ်မကြာခဏပြောဆိုလေ့ရှိသော်လည်းထိုသို့သောစားသုံးမှုသည်သူတို့၏လိင်မှုနှင့်နောက်ဆက်တွဲလိင်ဆိုင်ရာအလေ့အထများနှင့်ပတ်သက်သောသူတို့၏ဗဟုသုတအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်စေနိုင်သည်ဟုစဉ်းစားရန်ယုတ္တိတန်သည်ဟုဆိုရမည်။3,20,25,27] ။ ညစ်ညမ်းသောစားသုံးမှုသည်လူငယ်များအားလိင်ဆိုင်ရာလိင်ဆိုင်ရာအလေ့အကျင့်များ၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများ၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလေ့အကျင့်များစသည့်အလေ့အကျင့်များနှင့်ပတ်သက်သောဗဟုသုတများကိုအကျိုးသက်ရောက်နိုင်သည်အထိစာပေများကပြသသည်။4] ။ ထို့အပြင်၊ ညစ်ညမ်းမှုကိုစားသုံးခြင်းသည်အစစ်အမှန်ဘ ၀ ၌ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုအတုခိုးခြင်းနှင့်သူတို့အွန်လိုင်းပေါ်ရှိအန္တရာယ်များသောလိင်အလေ့အကျင့်များတွင်ပါ ၀ င်နိုင်သည့်လူငယ်များအတွက်သင်ယူမှုအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည်။3,13,29] ။ အခြားလေ့လာမှုများကလူငယ်များအနေဖြင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေရုပ်ပုံများသုံးစွဲမှုနှင့်သူတို့၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမရေရာမှုနှင့်သိသိသာသာမြင့်မားသောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစူးစမ်းလေ့လာမှုအပေါ်အပြုသဘောဆောင်သည့်သဘောထားများနှင့်ဆက်စပ်မှုကိုပြသခဲ့သည်။26].
လိင်မှုကိစ္စအတွေ့အကြုံနှင့် ပတ်သက်၍ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေရုပ်ပုံများကမြှင့်တင်ပေးနိုင်သည့်အားနည်းခြင်းနှင့်ခွင့်ပြုခြင်းသည်၎င်းအားပceivedိသန္ဓေတည်ခြင်းနှင့်ကျင့်သုံးခြင်းအပေါ်တိုက်ရိုက်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည်။ ထို့ကြောင့်အချို့သောအချက်အလက်များကအပြာစာပေရုပ်ပုံများသည်လိင်မှုကိစ္စကိုတိုးပွားစေနိုင်သည်ဟုမီးမောင်းထိုးပြသည်။ ထကြွလွယ်သော၊17,33] ။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုများသောအားဖြင့်ငယ်ရွယ်စဉ်ကတည်းကစတင်အသုံးပြုသည်ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းအားဖြင့်ဤစားသုံးမှုနှင့်ရင်ဆိုင်ရသောအခါလူငယ်များသည်အလိုက်သင့်ပြောင်းလဲခြင်းမရှိသောလိင်ဆက်ဆံမှုကိုဖွံ့ဖြိုးစေသောအန္တရာယ်အချက်များနှင့်ထိတွေ့မိနိုင်သည်။ ဤအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်အရညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများကိုအသုံးပြုသောလူငယ်များသည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများ၊ လက်တွေ့မဆန်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာယုံကြည်မှုများနှင့်တန်ဖိုးများကိုပိုမိုရရှိလာကြသည်။ ဆယ်ကျော်သက်များ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးလွန်သောအပြုအမူများနှင့်အကြမ်းဖက်မှုကိုဖော်ပြသည့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေရုပ်ပုံများကိုချိတ်ဆက်ထားကြောင်းတွေ့ရှိရသည်။20,25].
ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုစားသုံးခြင်းသည် hypersexualized အပြုအမူများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်ဆက်စပ်နေကြောင်းနှင့် hypersexuality သည်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးပြproblemsနာများဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည့်အန္တရာယ်များသောအတွေ့အကြုံများကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်ဟုသုတေသနပြုချက်ကဖော်ပြသည်။19] ။ ဆယ်ကျော်သက်များနှင့်လူငယ်များတွင်လိင်အကျင့်ယိုယွင်းမှုနှင့်စပ်လျဉ်း။ အတင်းအကျပ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတင်ပြသူများ (CSB) သည်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံအသုံးပြုမှုနှုန်းပိုမိုများပြားလာခြင်းနှင့်လိင်ဆက်ဆံမှုဆိုင်ရာအွန်လိုင်းလှုပ်ရှားမှုများကိုညစ်ညမ်းသောသုံးစွဲမှုနှုန်းနိမ့်ကျသောဆယ်ကျော်သက်များထက်ဆယ်ကျော်သက်များထက်ပိုမိုများပြားလာကြောင်းတွေ့ရှိရသည် လူငယ်လိင်ပြောင်းလဲမှုများတွင်အပြာစာပေရုပ်ပုံများကြည့်ခြင်း။17] ။ အလားတူပင်၊ (၁၈ နှစ်) ဆယ်ကျော်သက် (၄၀၂၆) နှင့်ဆွီဒင်၏လေ့လာမှုတစ်ခုအနေဖြင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုမကြာခဏစားသုံးခြင်းသည်အမူအကျင့်ဆိုင်ရာပြproblemsနာများနှင့်ဆက်နွှယ်ကြောင်းဖော်ပြသည်။ အရွယ်တူဖြစ်သည် .
၃.၁.၃ ။ လူ့အခွင့်အရေးနှင့်လိင်ဆက်ဆံမှုအားလွပ်လပ်စွာဖော်ပြခြင်း၊
ထို့အပြင်မကြာသေးမီကစာပေများတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများနှင့်ကျား၊ မရေးရာတန်းတူညီမျှမှုအပေါ်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများသုံးစွဲခြင်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုမီးမောင်းထိုးပြခဲ့သည်။ လိင်မှုဆိုင်ရာပညာရေးတွင်ရည်ညွှန်းချက်မရှိခြင်းကြောင့်လူငယ်များသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုပညာရေးဆိုင်ရာရည်ရွယ်ချက်များအတွက်အသုံးပြုသည်ဟူသောအချက်သည်အထူးသဖြင့်သက်ဆိုင်သည်။ ဤအလေ့အထသည်အတုပုံစံများ၏ပုံသဏ္toာန်ကိုအထောက်အကူပြုနိုင်သည်၊ ၎င်းတို့၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေ့ကြုံမှုများကိုကူးယူခြင်းနှင့်မျိုးပွားရန်ကြိုးစားခြင်းဖြင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေမှလေ့လာသည့်လိင်အလေ့အကျင့်များနှင့်လူငယ်အချို့သည်အစစ်အမှန်ဘဝတွင်ထိုကဲ့သို့သောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေအကြောင်းအရာများကိုလုပ်ရန်သို့မဟုတ်အတုယူရန်ဖိအားပေးခံရနိုင်ဖွယ်ရှိသည် သူတို့ကိုယ်သူတို့သို့မဟုတ်အခြားသူများအတွက်အလုပ်မဖြစ်အကျိုးဆက်များကိုတင်ပြ၏29].
အင်တာနက်လျင်မြန်စွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာမှုသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကြည့်ရှုခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောအချက်အလက်များဖြစ်သည်။ အွန်လိုင်းကမ္ဘာသည်တားမြစ်ပိတ်ပင်ထားသောလိင်အလေ့အကျင့်များပြုလုပ်နိုင်ရန်အတွက်လူမှုဆက်ဆံရေးပုံစံအသစ်များဖန်တီးရန်လွယ်ကူချောမွေ့စေသည်။ ကိစ္စများစွာတွင်၊ ဤအွန်လိုင်းလိင်အလေ့အကျင့်များသည်ခွဲခြားဆက်ဆံခြင်းမရှိ၊ အမည်မသိ၊ အကန့်အသတ်မရှိ၊ လွယ်ကူပြီးတာဝန်ဝတ္တရားများမှကင်းလွတ်ခွင့်ရှိသည်။ Save the Children မှထုတ်ဝေသောမကြာသေးမီကထုတ်ပြန်သောအစီရင်ခံစာတွင်ဆယ်ကျော်သက်နမူနာ (၁၄-၁၇ နှစ်အရွယ်) ၏ ၁၅% နီးပါးသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုစားသုံးခြင်းသည်သူတို့၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆက်ဆံရေးကိုအကြီးအကျယ်ထိခိုက်စေကြောင်းဖော်ပြခဲ့ပြီး၊ ".
ဘောလီစတာ et al ။ (၂၀၁၄) ကလူငယ်များတွင်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများသုံးစွဲမှု၏သက်ဆိုင်ရာအကျိုးသက်ရောက်မှုများအနက်တစ်ခုမှာဆက်ဆံရေးကိုပိုမိုခိုင်မာအောင်ပြုလုပ်ခြင်း၊ လူမှုဆက်ဆံရေး၊ မျှော်လင့်ချက်များ၊ ၎င်းတို့အားအကဲဖြတ်ရန်စံသတ်မှတ်ချက်များ၊ လူ့ဆက်ဆံရေး၏။ သူတို့၏သုတေသနတွင် ၁၆-၂၉ နှစ်ရှိလူငယ် ၃၇ ဦး နှင့် ၁၆-၂၂ နှစ်ရှိလူငယ် ၁၉ ဦး ၏နမူနာကို သုံး၍ Ballester et al ။  လူငယ်များတွင်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေကြည့်ရှုခြင်းကြောင့်ရှင်းလင်းစွာပြုပြင်ထားသောသဘောထားတစ်ခုမှာကွန်ဒုံးမရှိဘဲလိင်အင်္ဂါအင်္ဂါဇာတ်၊ မကြာခဏပြောင်းလဲနေသောမိတ်ဖက်အဖွဲ့များ၊ အုပ်စုလိုက်လိင်၊ စအိုဖြင့်လိင်ဆက်ဆံသူများနှင့်မတူသောစအိုလိင်စသည့်လိင်ဆက်ဆံမှုအလေ့အထများကိုလက်ခံခြင်းဖြစ်သည်။ စသည်ဖြင့်။
ထို့အပြင်မကြာသေးမီကလေ့လာမှုတစ်ခုကရင်းနှီးသောဆက်ဆံရေးကိုပြန်လည်ထူထောင်ပေးခြင်းသည်အကျိုးဆက်များကွဲပြားနိုင်သည်ဟုဆိုသည်။ ၎င်းတို့အနေဖြင့်ထိရောက်သောနှင့်လိင်ဆက်ဆံမှုဆိုင်ရာဆက်ဆံရေးကိုတည်ဆောက်ရန်နှင့်ထိန်းသိမ်းရန်အခက်အခဲများတိုးပွားလာခြင်း၊ လူမှုရေးအရအပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုများပြားလာခြင်းနှင့်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအဆင့်အတန်းနိမ့်ကျခြင်းတို့ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း  ။ အထူးသဖြင့်သူတို့၏ပြန်လည်သုံးသပ်မှုတွင်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသစ်များနှင့်ထိတွေ့ခြင်း၏ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောဆိုးကျိုးများအနက်မှတစ်ခုမှာလူငယ်များသည်သူတို့လေ့လာခဲ့သောအလေ့အကျင့်များကိုအတုယူသင့်သည်ဟုယုံကြည်စေခြင်းဖြစ်သည် (ဥပမာ၊ သဘောမတူသောလိင်၊ အကြမ်းဖက်မှု) လိင်မှုဆိုင်ရာအလေ့အကျင့်များ၊ ညစ်ညမ်းသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေတွင်ကြည့်ရှုသည့်တရားမဝင်လုပ်ဆောင်မှုများကိုကူးယူခြင်း (သို့) အင်တာနက်ပေါ်တွင်တွေ့ရသောအန္တရာယ်များသည့်လိင်မှုဆိုင်ရာအလေ့အကျင့်များတွင်ပါဝင်ခြင်း၊ နောက်ဆုံးအနေဖြင့်၊ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုခြင်းကြောင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများကိုမကြာခဏထိတွေ့ပြီးနောက်စိတ်ကျေနပ်မှုကိုရရှိရန်ပိုမိုကြီးမားသောအကြမ်းဖက်မှုလှုံ့ဆော်မှုများလိုအပ်သောကြောင့်၊1].
သူတို့ရဲ့သုတေသနမှာ Esquit နဲ့ Alvarado  ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေကြည့်ရှုခြင်းသည်လူငယ်များ၏စိတ်ဓာတ်ရေးရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုဆိုးကျိုးသက်ရောက်စေနိုင်သည်ဟုကောက်ချက်ချသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ အပြာအပြာစာပေကြည့်ရှုခြင်းအပေါ်စွဲလမ်းမှုသို့မဟုတ်စွဲလမ်းမှု၊ ပုံမှန်မဟုတ်သောလိင်ဖွံ့ဖြိုးမှုနှင့်လက်တွေ့မကျသောမျှော်လင့်ချက်များ၊ လိင်မှတဆင့်ကူးစက်သောရောဂါများနှင့်ကျန်းမာသောလိင်ဆိုင်ရာအမူအကျင့်နှင့်မိမိကိုယ်ကိုပုံရိပ်၏ပုံပျက်ယွင်းခြင်းများဖြစ်သည်။
ထို့အပြင်၊ ငယ်ရွယ်စဉ်ကပင်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုစားသုံးခြင်းသည်လိင်ဆက်ဆံခြင်းတွင်ကျားမအခန်းကဏ္ to နှင့်ဆက်စပ်သောပုံပျက်အတွေးအခေါ်များကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်အထောက်အကူပြုနိုင်သည်။ စက္ကူတစ်လျှောက်တွင်ပြသထားသည့်အတိုင်းလိင်ဆိုင်ရာအပြုအမူများ၊ လိင်ဆက်ဆံခြင်းဆိုင်ရာပုံပျက်မှုများနှင့်စံပြုမှုမရှိသော၊ လူမှုရေး၊ အကြမ်းဖက်သောအပြုအမူများပေါ်ပေါက်လာခြင်း။ ဤကိစ်စတှငျ Stanley et al ။  လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအနိုင်ကျင့်ခြင်းနှင့်အလွဲသုံးစားမှုများပိုမိုများပြားလာခြင်းနှင့်ပုံမှန်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုခြင်းသည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုသဘောဆောင်သည့်အပြုသဘောဆောင်သောလိင်သဘောထားများနှင့်ဆက်စပ်မှုရှိကြောင်းတွေ့ရှိရသည်။ ထိုကဲ့သို့သော "sexting" အဖြစ်။
၃.၂ ။ လူငယ်တွင်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများသုံးစွဲမှုနှင့်ဆက်စပ်သောမှုခင်းဆိုင်ရာသက်ရောက်မှုများနှင့်စိန်ခေါ်မှုများ
ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများသုံးစွဲခြင်းနှင့်လူမှုရေး၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကျိုးဆက်များအကြားအထက်ဖော်ပြပါဆက်နွယ်မှုအပြင်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသုံးစွဲမှုသည်ဥပဒေရေးရာနှင့်ရာဇ ၀ တ်မှုဆိုင်ရာအပြုအမူများနှင့်လည်းဆက်စပ်လျက်ရှိပြီး၊ ထို့ကြောင့်လက်ရှိလေ့လာမှုသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများသုံးစွဲမှုနှင့်ဆက်စပ်သောတရားရေးဆိုင်ရာစိန်ခေါ်မှုများနှင့်သက်ရောက်မှုအချို့ကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာလိမ့်မည်။ ဥပမာအနေဖြင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေရုပ်ပုံသုံးစွဲမှုနှင့်ဆက်စပ်သောဆက်စပ်မှုများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ လူငယ်များအတွင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးလွန်မှုများကျူးလွန်ခြင်းနှင့်နှိပ်စက်ညှင်းပန်းခြင်း၊ အကြောင်းအရင်းနှင့်အကျိုးဆက်အနေဖြင့်လိင်ဆက်ခြင်းနှင့်အွန်လိုင်းဝတ်စားဆင်ယင်မှုကဲ့သို့သောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနှင့်သက်ဆိုင်သောအွန်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုပုံစံအသစ်များပေါ်ပေါက်လာခြင်း။
၃.၂.၁ ။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများစားသုံးမှုနှင့် Paraphilias
ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများသုံးစွဲမှုနှင့်မတရားသောလိင်စိတ်သဘောထားများပေါ်ပေါက်လာခြင်းအကြားဆက်နွယ်မှုမှာသန္ဓေတည်မှုနှင့်အပြီးသတ်ရလဒ်ဖြစ်သည်။ ဤကိစ်စနှင့်စပ်လျဉ်း။ Ybarra နှင့်မစ်ချယ် (၂၀၀၅) တို့သည်ငယ်ရွယ်စဉ်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသုံးစွဲမှုနှင့်ရာဇ ၀ တ်မှုဆိုင်ရာအပြုအမူများ၊ မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှု၊ စိတ်ဓာတ်ကျမှုနှင့်မလုံခြုံသောတွယ်တာမှုများအကြားဆက်နွယ်မှုကိုတွေ့ရှိခဲ့သဖြင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသုံးစွဲမှုသည် paraphilias ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုအထောက်အကူပြုနိုင်သည်ဟုဆိုသည်။
ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသုံးစွဲမှုနှင့် paraphilias အကြားဆက်နွယ်မှုသည်တိုက်ရိုက်မဟုတ်ကြောင်းစာရေးသူအများစုကထောက်ပြကြသည်။ သူတို့သည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာရွက်များသုံးစွဲခြင်းသည်အခြေခံနှင့်ဖွံ့ဖြိုးမှုနည်းပါးသော paraphilia ကိုရှာဖွေဖော်ထုတ်ရန်၊9] ။ ဤအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်အရလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများနှင့်ထိတွေ့မှုမြင့်မားခြင်း၊10] ။ ထို့ကြောင့်အပြာစာပေရုပ်ပုံများကြည့်ရှုခြင်းနှင့်ဆက်စပ်လေ့ရှိသောအဆက်အသွယ်များမှာ voyeurism and exhibitionism ဖြစ်သည်။9,10] ။ Voyeurism သည် paraphilia တစ်ခုအနေဖြင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသုံးစွဲမှုနှင့်ဆက်စပ်နေပြီးထိုသူသည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်ကြည့်ရှုသည်။ သို့သော်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကြည့်ခြင်းဖြင့် voyeur အားညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများဖန်တီးရန်နှင့်သူတို့၏စိတ်ကူးယဉ်ဆန်သောစိတ်ကူးများကိုထောက်ပံ့ရန်ရည်ရွယ်ထားသောရုပ်ရှင်ကိုကြည့်ရှုရန်အခွင့်အရေးပေးသည်။9] ။ ထို့အပြင်ပြသခြင်းနှင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသုံးစွဲမှုအကြားဆက်စပ်မှုသည်ပြသရန်လွယ်ကူသောပြသရန် ၀ န်ဆောင်မှုခံသူများသည်ဝက်ဘ်ကင်မရာများမှတစ်ဆင့်သူတို့၏လိင်အင်္ဂါများကိုပြရန်သို့မဟုတ်ကိုယ်တိုင်ထုတ်လုပ်သည့်လိင်မှုဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများကိုမှတ်တမ်းတင်ရန်နှင့်အွန်လိုင်းပေါ်တွင်တင်ရန်ရှိသည်ကိုတွေ့မြင်သောအခါရှင်းလင်းလာသည်။9].
နောက်ဆုံးအနေဖြင့်၊ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသုံးစွဲမှုနှင့်အခြားအပိုပါဖီလီယာများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတို့အကြားတိုက်ရိုက်ဆက်နွယ်မှုကိုမဖော်ထုတ်နိုင်သော်လည်း“ အမာခံ” အပြာစာပေရုပ်ပုံများသို့မဟုတ်အကြမ်းဖက်အကြောင်းအရာများကိုသုံးစွဲခြင်းသည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာညှင်းပမ်းနှိပ်စက်မှုကဲ့သို့သော paraphilias များ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုအထောက်အကူပြုနိုင်သည်မှာရှင်းနေပါသည် သို့မဟုတ် pedophilia နှင့်ထို့အပြင်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအာကာသအတွင်း (ဥပမာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစော်ကားမှုသို့မဟုတ် pederasty ကဲ့သို့သော) သို့မဟုတ် virtual အာကာသအတွင်း (ထိုကဲ့သို့သော sexting သို့မဟုတ် online grooming ကဲ့သို့သော) ပြစ်မှုဆိုင်ရာအပြုအမူများလုပ်ဆောင်ရန်ဆန္ဒကိုပိုမိုအားကောင်းစေသည်9] ။ ထို့အပြင်အချို့သောစာပေများအရညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသုံးစွဲမှုသည်သုံးစွဲမှု၏ပထမအသက်အရွယ်ပေါ် မူတည်၍ တဖြည်းဖြည်းတိုးတက်လာသည်။ ဤတွေ့ရှိချက်များကိုအရွယ်ရောက်ပြီးသူနမူနာလေ့လာမှုမှထုတ်ယူခဲ့သည်။ သို့သော်အစောပိုင်းအဆင့်များ၌ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုစတင်ဖော်ထုတ်ခဲ့သူများသည်နောက်ပိုင်းညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိထိတွေ့ခဲ့သူများနှင့်ဆန့်ကျင်။ သမားရိုးကျမဟုတ်သောနှင့်ပုံဆောင်သဘောမပါသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုစားသုံးခြင်း၏ဖြစ်နိုင်ခြေမြင့်မားကြောင်းပြသခဲ့သည်။ အသက်ကြီးသောအရွယ်40] ။ ဤရလဒ်များအရ၊ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုအစောပိုင်းရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိထိတွေ့ခြင်းသည်အရွယ်ရောက်ပြီးသူများ၏နောက်ပိုင်းအဆင့်များတွင် paraphilic ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများသုံးစွဲမှုနှင့်ဆက်စပ်ပါကထိတွေ့မှုအစောပိုင်းကသုံးစွဲသူအပေါ်ပိုမိုကြီးမားသောအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုစတင်သည်ဟုဆိုလိုသည်၊ ငယ်စဉ်ကကဲ့သို့အစောပိုင်းထိတွေ့မှု၏သက်ရောက်မှုများသည်လူကြီးများတွင်တွေ့ရသည့်အရာများထက်ပင်ကြီးမားနိုင်သည်။
၃.၂.၂ ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးလွန်ဖောက်ဖျက်မှုနှင့်ကျူးလွန်ခံရခြင်း
ယခင်ကဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းSánchezနှင့် Iruarrizaga  ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေကြည့်ရှုခြင်းသည်လိင်ဆိုင်ရာရာဇ ၀ တ်မှုများကျူးလွန်ရန်အားပေးပြီးလွယ်ကူချောမွေ့စေသည်ဟုအကြံပြုသည်၊ စပိန်ဆယ်ကျော်သက်များနှင့်ပြုလုပ်သောမကြာသေးမီကပြုလုပ်ခဲ့သောလေ့လာမှုတစ်ခုအရနမူနာ ၇၂ ရာခိုင်နှုန်းက၎င်းတို့သုံးစွဲသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများသည်အကြမ်းဖက်မှုဖြစ်သည်ဟုယူဆခဲ့သည်။13] နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရန်လိုသည့်အပြုအမူများတိုးပွားလာခြင်းနှင့်အကြမ်းဖက်မှုကိုပုံဖော်ထားသောဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုမှုကိုချိတ်ဆက်ထားသည့်တသမတ်တည်းတွေ့ရှိချက်များထွက်ပေါ်လာခဲ့သည်။25] ။ ထို့အပြင်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအမျိုးမျိုးအနေဖြင့်အရွယ်မရောက်သေးသူများအနေဖြင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများသုံးစွဲမှုနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစော်ကားမှုများပြားလာခြင်း၊14,41] ။ ဒီသဘောနဲ့ Ybarra et al ။  (၁၄ နှစ်မှ ၁၉ နှစ်ကြား) ဆယ်ကျော်သက် ၁၅၈၈ ဦး နှင့်နှစ်ရှည်လေ့လာမှုပြုလုပ်ခဲ့ပြီးအကြမ်းဖက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကြည့်ရှုသောအရွယ်မရောက်သေးသူများသည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးလွန်သောအပြုအမူများကိုခြောက်ဆပိုမိုကျူးလွန်ကြောင်းလေ့လာတွေ့ရှိခဲ့သည်။
Ybarra နှင့် Mitchell တို့၏လေ့လာမှုကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။35] အကြမ်းဖက်အပြုအမူကိုပြသရန်အန္တရာယ်ရှိသည့်အမျိုးသားများအနက်၊ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုမကြာခဏသုံးစွဲလေ့ရှိသူများသည်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများကိုမကြာခဏမသုံးစွဲသောအမျိုးသားများထက်တစ်စုံတစ် ဦး အားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစော်ကားရန် ၄ ဆပိုများကြောင်း] တွေ့ရှိခဲ့သည် ထို့အပြင်မကြာသေးမီကစာပေပြန်လည်သုံးသပ်မှုကညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသုံးစွဲမှုနှင့်ဆယ်ကျော်သက်များ၌လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးလွန်မှုများအကြားဆက်နွယ်မှုကိုမီးမောင်းထိုးပြခဲ့သည်။3].
ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသုံးစွဲမှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစော်ကားမှုကျူးလွန်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ Bonino et al မှစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။  အီတလီဆယ်ကျော်သက်လူငယ်များနှင့်အတူပြသထားသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေရုပ်ပုံများသည်လိင်ကြင်ဖော်ဖက်အားလိင်အနှောင့်အယှက်ပေးခြင်းသို့မဟုတ်လိင်ဆက်ဆံခြင်းကိုတစ်စုံတစ် ဦး အားအတင်းအကျပ်စေခိုင်းခြင်းနှင့်ဆက်စပ်နေသည်ဟုပြသခဲ့သည်။ ထို့အပြင် Ybarra သည်အခြားလေ့လာမှုများကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။41] လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစော်ကားမှုကိုကျူးလွန်ခြင်းကအကြမ်းဖက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများသုံးစွဲခြင်းနှင့်ဆက်စပ်နေသော်လည်းယေဘူယျအားဖြင့်အကြမ်းမဖက်သောညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံများအသုံးပြုခြင်းနှင့်ဆက်စပ်နေသည်ဟုတွေ့ရှိရသည်။ ထို့အပြင် Stanley et al ။  ၁၄-၁၇ နှစ်အရွယ်ဆယ်ကျော်သက် ၄၅၆၄ ပါ ၀ င်သောနမူနာနှင့်အတူလေ့လာမှုတစ်ခုကိုပြုလုပ်ခဲ့ပြီးယောက်ျားလေးများသည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကျပ်ကိုင်ခြင်းနှင့်အလွဲသုံးစားပြုမှုကိုအွန်လိုင်းညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုပုံမှန်ကြည့်ရှုခြင်းနှင့်သိသိသာသာဆက်နွယ်နေသည်ကိုတွေ့ရှိခဲ့သည်။
နောက်ဆုံးအနေဖြင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသုံးစွဲမှုနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစော်ကားခံရမှုနှင့် ပတ်သက်၍ Bonino et al ။  သူတို့၏ဆယ်ကျော်သက်အီတလီနမူနာများတွင်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများကိုပိုမိုသုံးစွဲသောမိန်းကလေးများသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုမစားသောမိန်းကလေးများထက်လိင်အကြမ်းဖက်မှုခံရသူဖြစ်နိုင်ခြေပိုများကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့သည်
၃.၂.၃ ။ Sexting နှင့်အွန်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသားကောင်များ၏အခြားပုံစံများ
နည်းပညာအသစ်များနှင့်အင်တာနက်မှတဆင့်ချက်ချင်းဆက်သွယ်မှုများလျင်မြန်စွာတိုးတက်ခြင်းသည်လူမှုရေးအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုနည်းလမ်းသစ်များဖြစ်ပေါ်စေသည်။ အချို့သောလူမှုရေးအပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုများသည်မထိခိုက်စေသကဲ့သို့ဆိုးကျိုးများလည်းမရှိပါ။ မည်သို့ပင်ဆိုစေ၊ အွန်လိုင်းပတ်ဝန်းကျင်တွင်လိင်မှုဆိုင်ရာနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှစ်မျိုးစလုံးတွင်အွန်လိုင်းသားကောင်ခြင်းပုံစံအသစ်များပေါ်ပေါက်လာနိုင်သည့်အန္တရာယ်များပါ ၀ င်နိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်လူငယ်များမှညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေကြည့်ရှုမှုသည် sexting ဟုခေါ်သောအွန်လိုင်းလိင်မှုဆိုင်ရာအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုပုံစံအသစ်နှင့်ဆက်စပ်နေသည်။8] ။ Sexting ဆိုသည်မှာလိင်ဆိုင်ရာရှင်းလင်းပြတ်သားသောစာသားမက်ဆေ့ခ်ျများ၊ ယခင်စာပေများအရ sexting တွင်ပါဝင်သူများသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသုံးစွဲမှုအပေါ်ထားရှိသည့်သဘောထားများကိုပိုမိုလက်ခံပြီး sexting အပြုအမူများတွင်မပါ ၀ င်သူများထက်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများကိုပိုမိုသုံးစွဲကြသည်ကိုတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ဤကိစ်စနှင့်စပ်လျဉ်း။ ဥရောပဆယ်ကျော်သက် ၄၅၆၄ ဦး ကိုနမူနာယူကာသုတေသနပြုချက်အရအွန်လိုင်းညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများကိုလေ့လာခြင်းသည်နိုင်ငံအားလုံးနီးပါးတွင်လိင်ဆိုင်ရာပုံများ / မက်ဆေ့ခ်ျများပေးပို့ခြင်းသည်ယောက်ျားလေးများအတွက်သိသိသာသာတိုးလာခြင်းနှင့်ဆက်စပ်နေသည်ဟုတွေ့ရှိရသည်။30] စပိန်ဆယ်ကျော်သက်များအကြားညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများသုံးစွဲမှုနှင့် ပတ်သက်၍ မကြာသေးမီကထုတ်ပြန်ခဲ့သောအစီရင်ခံစာနှင့်အညီ 13] ။ Save the Children မှပြုလုပ်သောလေ့လာမှုကအသက် ၁၄ နှစ်မှ ၁၇ နှစ်ရှိဆယ်ကျော်သက် ၁၆၈၀ ကိုစစ်တမ်းကောက်ယူခဲ့ပြီးညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုသော ၂၀.၂% သည်အနည်းဆုံးတစ်ကြိမ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများကိုမျှဝေသုံးစွဲခဲ့ကြပြီးအပြာစားသုံးသူများနှင့်စားသုံးသူမဟုတ်သူများအကြားဆက်နွယ်မှုဆိုင်ရာသိသိသာသာကွဲပြားခြားနားမှုများရှိခဲ့သည်။ သုံးစွဲသူများသည် sexting အလေ့အကျင့်များတွင်သုံးစွဲသူများမဟုတ်သူများထက် ပို၍ မကြာခဏပါဝင်နေသည်။13] ။ ထို့အပြင်အပြာစာပေရုပ်ပုံများကြည့်ခြင်းအားဖြင့်မသိသောလူများနှင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်းအတွက်ဆက်သွယ်ခြင်းနှင့်သိသိသာသာဆက်နွယ်နေသည်။ ၎င်းမှာအန္တရာယ်ကင်းသောအပြုအမူဖြစ်သောအွန်လိုင်းညှင်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်း၊ sexting အတင်းအကျပ်ပြုခြင်း၊42] ။ Save the Children မှတင်ပြသောမကြာသေးမီကပြုလုပ်ခဲ့သောစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများအရညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုအသုံးပြုသောဆယ်ကျော်သက်များ၏ ၁၇% သည်မသိသောသူအားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရည်ရွယ်ချက်များအတွက်အွန်လိုင်းနှင့်ဆက်သွယ်ခဲ့ကြောင်း၊ ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများကိုစားသုံးသူများထဲမှ ၁.၆% သည်မသိသောသူအားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရည်ရွယ်ချက်များအတွက်အွန်လိုင်းနှင့်မကြာခဏဆက်သွယ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။13].
လိင်မှုဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများကိုလိင်ဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများကိုဖြန့်ဝေခြင်းသို့မဟုတ်ဖိအားပေးခြင်းသို့မဟုတ်လိင်ဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများကိုပေးပို့ခြင်းသို့အတင်းအကျပ်စေခိုင်းခံရခြင်းကဲ့သို့သောဆယ်ကျော်သက်များအတွက်အန္တရာယ်ကြီးစွာဖြစ်ပေါ်စေသည်။43] ။ ထို့အပြင် sexting နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများကိုသဘောမတူခြင်းဖြန့်ဝေခြင်းမှဆင်းသက်လာသောဤအပြုအမူများတွင်ပါ ၀ င်သူများသည်ဆိုက်ဘာအနိုင်ကျင့်ခြင်း၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစော်ကားနှောင့်ယှက်ခြင်း၊ sextortion နှင့်အရွယ်မရောက်သေးသူများအနေနှင့်အွန်လိုင်း grooming ၏သားကောင်များဖြစ်လာနိုင်သည်  ။ sexting အပြုအမူများတွင်ပါဝင်ခြင်းသည်အရွယ်မရောက်သေးသူများအတွက်အပိုဆောင်းအန္တရာယ်ရှိသည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော်အလိုအလျောက်ထုတ်လုပ်သည့်လိင်အကြောင်းအရာကိုကလေးညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေဟုသတ်မှတ်နိုင်သည်။ ဆယ်ကျော်သက်များသည်သူတို့၏ကိုယ်ပိုင်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုဖန်တီးဖြန့်ဖြူးခြင်းဖြစ်သည်။44] ။ ထို့အပြင်၊ လူငယ်များအကြား sexting နှင့်လိင်မှုဆိုင်ရာမိတ်ဖက်ပြုမှုဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုများအကြားဆက်နွယ်မှုကိုတွေ့ရှိခဲ့ရပြီးရလဒ်များအရလိင်အကြမ်းဖက်မှုများ (အတင်းအဓမ္မဖိအားပေးမှုများ) တွင်ပါ ၀ င်ခဲ့သောမိန်းကလေးများသည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံရိပ်ကိုမရိုက်ခဲ့သူများထက်သိသိသာသာပိုမိုများပြားကြောင်းတွေ့ရှိရသည် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်ခံရသူများ .
ဤအပြုအမူများနှင့်အွန်လိုင်းလိင်အကြမ်းဖက်မှုပုံစံများကိုစာရေးသူများစွာကစိတ်ပညာဆိုင်ရာအကျိုးဆက်များနှင့်ချိတ်ဆက်ထားသည်။43] ။ ဗန် Ouytsel, ဗန် Gool, Ponnet နှင့် Walrave  စိတ်ဓာတ်ကျခြင်း၊ စိုးရိမ်ခြင်းနှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှုများမြင့်မားသောဆက်စ်တင်အပြုအမူများတွင် Dake, Price, Maziarz နှင့် Ward တို့ပါ ၀ င်သည်။46] sexting နှင့်စိတ်ဓာတ်ကျခြင်းနှင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသတ်သေခြင်းစသောမြင့်မားသောအဆင့်များအကြားသိသာသောဆက်စပ်မှုကိုတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ထို့အပြင်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာကြည့်ခြင်းနှင့် sexting အပြုအမူများတွင်ပါ ၀ င်ခြင်းသည် online grooming သားကောင်ခြင်းနှင့်ဆက်စပ်သောအန္တရာယ်ရှိသောအပြုအမူများဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်အပြာစာပေရုပ်ပုံများနှင့် sexting တွင်ပိုမိုပါဝင်မှုသည် online grooming ၏သားကောင်ဖြစ်ခြင်း၏ဖြစ်နိုင်ခြေကိုမြှင့်တင်ပေးနိုင်သည်။47].
အထက်ဖော်ပြပါအချက်အလက်များသည်အရွယ်မရောက်သေးသူများ၌ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများသုံးစွဲမှုနှင့် sexting၊ cyberbullying, sextortion နှင့် online grooming စသည့်အွန်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာချိုးဖောက်မှုပုံစံများအကြားရှိပြီးသားဆက်စပ်မှုကိုပြသသည်။ ထို့အပြင်၎င်းသည်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြောင်းလဲခြင်းနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါလက္ခဏာများအကြားဆက်နွယ်မှုကိုအတည်ပြုပေးပြီး၊ မှုခင်းလေ့ကျင့်မှုတွင်မတူညီသောဖြစ်ရပ်များအားတိကျမှန်ကန်စွာအကဲဖြတ်ခြင်း၏အရေးကြီးပုံကိုမီးမောင်းထိုးပြသည်။42,43].
4 ။ ဆွေးနွေးချက်နှင့်နိဂုံး
လူငယ်များ၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်လူမှုဆက်ဆံရေးသည်နေ့စဉ်ဘဝတွင်နည်းပညာပြတ်တောက်မှုကြောင့်အရေးကြီးသောပြောင်းလဲမှုများကိုကြုံတွေ့ရပြီးသူတို့၏အပြန်အလှန်အကျိုးပြုမှုများစွာသည်အွန်လိုင်းကမ္ဘာသို့ပြောင်းလဲသွားသည်။ ဆိုက်ဘာစပေ့ဟုလူသိများသည့်ဤကမ္ဘာသစ်တွင်လူငယ်များသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေအပါအ ၀ င်အကြောင်းအရာအမျိုးမျိုးကိုလက်လှမ်းမီသည်။ သုတေသနပြုချက်အရစပိန်နိုင်ငံရှိအွန်လိုင်းလိင်မှုဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများနှင့်ပထမဆုံးထိတွေ့မှု၏သက်တမ်းသည် ၈ နှစ်အောက်ဖြစ်ပြီးယေဘူယျစားသုံးမှုသည် ၁၃ မှ ၁၄ အထိဖြစ်သည်။ နှစ်ပေါင်း  ။ ဤသဘောမျိုးဖြင့်အီလက်ထရွန်နစ်ပစ္စည်းများကိုအကန့်အသတ်မရှိအသုံးပြုခြင်းသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကြည့်ရှုခြင်းနှင့်စားသုံးခြင်းနည်းလမ်းသစ်ကိုလိင်ဆက်ဆံခြင်းတွင်လိင်မှုဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်ကျား၊ မတန်းတူညီမျှမှုအပေါ်များစွာအကျိုးသက်ရောက်စေနိုင်သည်။
လူငယ်များတွင်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုခြင်းမှရရှိသောအကျိုးဆက်များနှင့်စပ်လျဉ်း။ လေ့လာမှုများအရညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသစ်များ (ချက်ချင်းလက်လှမ်းမီမှု) ၏ပင်ကိုလက္ခဏာများသည်မူးယစ်ဆေးစွဲမှုနှင့်ဆင်တူသည့်လုပ်ငန်းစဉ်ကိုဖြစ်ပေါ်စေပြီး၊ ထိုကဲ့သို့သောစွဲနှင့်အတူတစ် ဦး ချင်းစီအတွက် neuroplastic အပြောင်းအလဲများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုအဖြစ်အလုပ်မဖြစ်အကျိုးဆက်များ [33,38] ။ ထို့အပြင်အစောပိုင်းအဆင့်များ၌ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့် hypersexualized အပြုအမူများဖွံ့ဖြိုးလာရန် ဦး စားပေးအချက်တစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။ တကယ်တော့၊ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသုံးစွဲမှုဟာမကြာခဏဆိုသလို hypersexual အပြုအမူတွေကိုအများဆုံးတွေ့ရတတ်တယ်။28] ။ ဤသဘောမျိုးဖြင့်သုတေသနအရပိုမိုမြင့်မားသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေရုပ်ပုံအသုံးပြုခြင်းနှင့်လိင်နှင့်သက်ဆိုင်သောအွန်လိုင်းလှုပ်ရှားမှုများသည်လူငယ်များအနေဖြင့်အတင်းအဓမ္မလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများနှင့်ဆက်နွယ်နေသည်၊ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများမကြာခဏစားသုံးခြင်းသည်အမူအကျင့်ဆိုင်ရာပြproblemsနာများနှင့်ဆက်စပ်နေပြီး၊ လူငယ်များ [17,31].
လေ့လာမှုတော်တော်များများသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများသုံးစွဲမှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့်လူငယ်များ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသဘောထားများ၊5,8,20] ။ လူငယ်များသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဗဟုသုတနှင့်သတင်းအချက်အလက်ရရှိရန်နည်းလမ်းတစ်ခုအဖြစ်မကြာခဏပြောဆိုလေ့ရှိသော်လည်းထိုသို့သောစားသုံးမှုသည်လိင်နှင့်ပတ်သက်သောသူတို့၏ဗဟုသုတနှင့်လိင်ဆက်ဆံမှုဆိုင်ရာလိင်ဆက်ဆံမှုကဲ့သို့သောသူတို့၏နောက်ဆက်တွဲလိင်အလေ့အကျင့်များအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်စေနိုင်သည်ဟုစဉ်းစားရန်ယုတ္တိတန်သည်ဟုဆိုရမည် အပြုအမူ၊ အတိအကျလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုနှင့်လိင်ဆိုင်ရာအလေ့အကျင့်အမျိုးမျိုး3,4,20,25,27] ။ ထို့အပြင်၊ ညစ်ညမ်းမှုကိုစားသုံးခြင်းသည်အစစ်အမှန်ဘဝတွင်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေဗီဒီယိုများကိုအတုယူသောလူငယ်များအပေါ်လေ့လာမှုအကျိုးသက်ရောက်မှုဖြစ်စေနိုင်သည်၊ ထို့အပြင်သူတို့အွန်လိုင်းပေါ်တွင်ကြည့်နေသောလိင်မှုဆိုင်ရာအလေ့အကျင့်များတွင်ပါ ၀ င်နိုင်သည်။3,13,29].
ထို့အပြင်အပြာစာပေရုပ်ပုံကြည့်ရှုခြင်းသည်အထူးသဖြင့်ကျား၊1,30] ။ အလားတူစွာလိင်အကျင့်ယိုယွင်းခြင်းနှင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုခြင်းသည်အန္တရာယ်ကင်းပြီးအန္တရာယ်များသောလိင်ဆိုင်ရာအလေ့အကျင့်များသို့ ဦး တည်စေနိုင်သည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်သုတေသနတွေ့ရှိချက်အရညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုခြင်းသည်လူပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး တစ်ယောက်၏ကျန်းမာရေးနှင့်မညီညွတ်သောဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်အန္တရာယ်အချက်တစ်ခုဖြစ်သည့်လူ့အခွင့်အရေးနှင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်းနှင့်လိင်မှုဆိုင်ရာပြdecနာများကိုဖယ်ထုတ်ခြင်း၊ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုခြင်းကြောင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများကိုမကြာခဏထိတွေ့ပြီးနောက်စိတ်ကျေနပ်မှုကိုရရှိရန်သုံးစွဲသူများသည် ပိုမို၍ အကြမ်းဖက်သောလှုံ့ဆော်မှုများလိုအပ်သောကြောင့်အမာခံဓလေ့ထုံးတမ်းများမြင့်တက်လာနိုင်သည်ဟုအကြံပြုထားသည်။1] ။ ဤသဘောမျိုးဖြင့်လူငယ်များသည်လိင်ပညာရေးကိုရည်ညွှန်းခြင်းမရှိသောကြောင့်ပညာရေးဆိုင်ရာရည်ရွယ်ချက်များအတွက်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများကိုအသုံးပြုသည်ကိုသတိပြုသင့်သည်။ ၎င်းသည်တုပသောပုံစံများကိုပေါ်ပေါက်စေနိုင်သည်။ လူငယ်များအနေဖြင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေရုပ်ပုံများကိုကိုယ်တိုင်သို့မဟုတ်အခြားသူများအတွက်အလုပ်မဖြစ်သောအကျိုးဆက်များကိုတင်ပြရန်ဖိအားပေးခံရနိုင်သည်။29].
ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုခြင်းနှင့်ဆက်စပ်သောမှုခင်းဆိုင်ရာအကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းဖြင့်လေ့လာမှုများအရ paraphilias များဖွံ့ဖြိုးမှုနှင့်ဆက်စပ်မှုကိုပြသခဲ့သည်။ ဥပမာအားဖြင့်လိင်မှုဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများကိုပိုမိုထိရောက်စွာလေ့လာခြင်း၊ ပိုမိုဖြစ်နိုင်ခြေမှာလူငယ်များသည် paraphilia ကိုပြသခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် "အမာခံ" ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသို့မဟုတ်လိင်အကြမ်းဖက်မှုပါသောအကြောင်းအရာများကိုအသုံးပြုခြင်းသည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာညှင်းပမ်းနှိပ်စက်ခြင်းနှင့် pedophilia တို့၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုပိုဆိုးစေပြီးရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတို့တွင်ပြစ်မှုဆိုင်ရာအပြုအမူအချို့ကိုလုပ်ဆောင်ရန်ဆန္ဒကိုပိုမိုဆိုးရွားစေနိုင်သည်။25] ။ တူညီသောအချက်များအရသုတေသနပြုမှုကညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများသုံးစွဲမှုနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးလွန်ခြင်းများကိုအနိုင်ကျင့်ခြင်းနှင့်ကျူးလွန်ခံရခြင်းအန္တရာယ်တိုးပွားလာခြင်းအကြားဆက်စပ်မှုကိုပြသခဲ့သည်။ ရလဒ်များအရညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများသုံးစွဲမှုသည်အမျိုးသားများတွင်လိင်အကြမ်းဖက်မှုများပိုမိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပြီးအမျိုးသမီးများသည်လိင်အကြမ်းဖက်မှုများကိုခံရသူဖြစ်နိုင်ခြေကိုတိုးပွားစေသည်။14,35] ။ အွန်လိုင်းလိင်အကြမ်းဖက်မှုပုံစံများနှင့်စပ်လျဉ်း။ လူငယ်တွင်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကြည့်ရှုခြင်းသည် sexting နှင့်ဆက်နွယ်နေပြီးဤသားကောင်သည်လိင်မှုဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများကိုသဘောမတူခြင်းဖြန့်ဖြူးခြင်း၊ ဆိုက်ဘာအနိုင်ကျင့်ခြင်း၊ လိင်အကွမ်းဖက်ခြင်းနှင့်အွန်လိုင်းဝတ်စားဆင်ယင်မှုကဲ့သို့သောအခြားအပြုအမူများသို့တိုးချဲ့နိုင်သည်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုစားသုံးသောဆယ်ကျော်သက်ငါးယောက်အနက်တစ် ဦး သည်လိင်မှုဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများကိုမျှဝေကြောင်းနှင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုသူများနှင့်လိင်မတူသူများအကြားအပြုအမူဆိုင်ရာဆက်နွယ်မှုများတွင်သိသာထင်ရှားသောကွဲပြားခြားနားမှုများတွေ့ရှိရသည်ဟုမကြာသေးမီကသုတေသနပြုချက်ကဖော်ပြခဲ့သည်။30] ။ ထို့အပြင်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသုံးစွဲမှုသည်မသိသောလူများနှင့်လိင်ဆက်ဆံမှုအတွက်အွန်လိုင်းဆက်သွယ်ခြင်းနှင့်သိသိသာသာဆက်နွယ်နေသည်။ ၎င်းမှာအန္တရာယ်ကင်းသောအပြုအမူဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အွန်လိုင်းအားဖြည့်ခြင်း၊42].
နိဂုံးချုပ်အနေဖြင့်၊ လူငယ်တွင်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများသုံးစွဲမှုသည်လူငယ်များ၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွင်သိသာသောအန္တရာယ်များနှင့်သက်ရောက်မှုများဖြစ်ပေါ်စေပြီး၊ အွန်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်ခံရမှုပုံစံအသစ်များပေါ်ပေါက်လာစေသည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်ဤဇာတ်ကြောင်းပြန်လည်သုံးသပ်ချက်မှရလဒ်များအရညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုစားသုံးခြင်းသည်လူငယ်များအတွက်ကျန်းမာသောလူမှုရေးနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုမီးမောင်းထိုးပြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ရလဒ်များအရညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုအစောပိုင်းရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိထိတွေ့ခြင်းသည်လိင်ဆက်ဆံခြင်းနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆက်နွယ်မှုများတွင်ကျားမမညီမျှမှုပုံစံများကိုဆက်လက်တည်တံ့စေရန်ကူညီခြင်းဖြင့်လူငယ်များ၏အပြုအမူကိုဆိုးကျိုးသက်ရောက်စေနိုင်သည်ကိုဖော်ပြသည်။ ထို့အပြင်၊ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုစောစီးစွာစားသုံးခြင်းသည်မှုခင်းဆိုင်ရာအကျိုးသက်ရောက်မှုများနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ ဥပမာအားဖြင့် paraphilias ပိုမိုဆိုးရွားလာခြင်းနှင့်အွန်လိုင်းနှင့်အော့ဖ်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးကျော်မှုကျူးလွန်ခြင်းနှင့်သားကောင်ဖြစ်ခြင်းတို့ကြောင့်လူငယ်ဖွံ့ဖြိုးမှုအပေါ်ဆိုးကျိုးသက်ရောက်နိုင်သည်။ အနာဂတ်သုတေသနလိုင်းများသည်တင်ပြလာသောပြissuesနာများနှင့်စိန်ခေါ်မှုများ၏အစစ်အမှန်၊ ချက်ချင်းနှင့်အနာဂတ်သက်ရောက်မှုများကိုအကဲဖြတ်ရန်အပြင်ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စုများကိုပစ်မှတ်ထားသောကြိုတင်ကာကွယ်ခြင်း၊
ဤလေ့လာမှုကိုလူငယ်များအတွင်းညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသုံးစွဲမှုနှင့်လူမှုရေး၊ လိင်နှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကျိုးဆက်များအကြားဆက်စပ်မှုကိုဖြေရှင်းရန်လက်တွေ့နှင့်လက်တွေ့မဟုတ်သောသုတေသနကိုဖော်ထုတ်ရန်ဇာတ်ကြောင်းပြန်လည်သုံးသပ်ချက်တစ်ခုအဖြစ်ကောက်ယူခဲ့ပြီး၎င်းသည်ပထမဆုံးချဉ်းကပ်မှုနှင့်အနီးစပ်ဆုံးချဉ်းကပ်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများသုံးစွဲမှုနှင့် ပတ်သက်၍ မေးခွန်းများ၏အခြေအနေနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်မှုခင်းဆိုင်ရာစိန်ခေါ်မှုများ။ တင်ပြထားသောခေါင်းစဉ်နှင့် ပတ်သက်၍ ပိုမိုနက်ရှိုင်းစွာလေ့လာမှုကိုစနစ်တကျပြန်လည်သုံးသပ်သည့်နည်းစနစ်ကို အသုံးပြု၍ ပြုလုပ်သင့်သည်။ ထို့ကြောင့်လေ့လာမှုတွင်တင်ပြသောရလဒ်များကိုသတိဖြင့်ယေဘူယျအားဖြင့်ဖော်ပြသင့်သည်။ သတိပြုသင့်သည်မှာနည်းပညာဆိုင်ရာတိုးတက်မှုများကဤနယ်ပယ်ရှိစာပေများသည်အလွန်လျှင်မြန်စွာကုန်သွားပြီး ၂ ဝ ၁၂ ခုနှစ်နှင့်အစောပိုင်းကာလများမှစာတမ်းများသည်လက်ရှိရုပ်ပုံကိုလုံးဝထင်ဟပ်ခြင်းမရှိဟုဆိုလိုသည်။ ထိုနည်းတူစွာ၊ ပြန်လည်သုံးသပ်လေ့လာမှုအများစုသည်၎င်းတို့၏သုတေသနတွင်အသုံးပြုသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေ (လိင်ကွဲလိင်တူဆက်ဆံသူ၊ အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသမီးစသည်တို့) နှင့်မလိင်တူဆက်ဆံခြင်းဆိုင်ရာလိင်မှုဆိုင်ရာအပြာစာပေများကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းမပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းသတိပြုသင့်သည်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေအမျိုးအစားများ၏သက်ရောက်မှုကိုလူငယ်များအနေဖြင့်ဆက်လက်လေ့လာသင့်သည်။
Conceptualization, AMG နှင့် AB-G ။ ; နည်းပညာ, AMG နှင့် AB-G ။ ; အရေးယူမူရင်းမူကြမ်းပြင်ဆင်မှု AB-G ။ ; ရေးသားခြင်း - သုံးသပ်ခြင်းနှင့်တည်းဖြတ်ခြင်း၊ AMG စာရေးသူအားလုံးသည်ထုတ်ဝေထားသောလက်ရေးမူများမှာတွေ့နိုင်သည်